4 ngezindlela kanjani ukususa amafutha emilenzeni
imilenze Beautiful - akusiyo kuphela ukuziqhenya yilowo nalowo wesifazane, kodwa umphumela umsebenzi onzima odinga amandla, oluhambisana amandla omkhulu intando. Ngokuvamile, le ngxenye yomzimba echayeke yamafutha amaningi emzimbeni. Ukulondoloza ke isesimweni esihle kuyinto akuwona neze umsebenzi olula, indlela ukususa amafutha emilenzeni kanzima kakhulu. Kuyinto engenakwenzeka ukufeza imiphumela kubonakala kwamasonto ambalwa, kodwa uma enza konke okusemandleni akhe, lo yokubukisa, ukwenzela ukungena okuncane kakhulu, imilente iqine uyoba ngokoqobo. Kukhona 2 izindlela main yokuxazulula le nkinga, indlela ukususa amafutha emilenzeni: i kuhlinzwa non-kuhlinzwa.
indlela Nonsurgical kusho elinganiselayo ukudla, ukuvivinya umzimba bese massage. Abesifazane abafuna ukuba amahle imilenze emide emincane, kufanele ithawula usawoti, ufulawa, amaswidi, ukudla okuthosiwe kanye ukugxila kakhudlwana imifino, izithelo, amanzi non-carbonated futhi ukudla amaprotheni. Akunakwenzeka ukuqeda fat ngemilenze ngaphandle Ukudla ziphekwe ngendlela efanele. Into ebalulekile lapha ukudla amaprotheni esisiza ekwakheni imisipha amaseli. Batinikela umumo omuhle kwemilenze wonke umzimba.
Kubalulekile kakhulu kwezemidlalo. Lapha, ukhetho best kuyoba cishe yonke cardio, ngoba ngandlela-thile ehilela imisipha imilenze nezinqe. Lokhu kungaba egijima, ukuhamba, ebhukuda, squats. Kakhulu ukuhlaselwa ngempumelelo imilenze yanjalo. Ukuqala isikhundla: bemile ngqo. Khona-ke unyawo lwesokudla lufakwa phambili, kanye kwesokunxele izimisele ngesikhathi edolweni i-engela 90 degrees, ingawuthinti phansi. nomlenze wesokunene emuva endaweni, kanye nokusebenzisa iyaphindwa nezinye emlenzeni. Ukuze kuzuzwe umphumela kubalulekile ukwenza okungenani izikhathi 15 umlenze ngamunye nsuku zonke. Ukuze ashise amanoni nasemilenzeni kungenziwa igqoke ngesikhathi ukuqeqesha leggings ekhethekile, okuyinto ukudala umphumela sauna. Ngakho, izinga lokushisa komzimba liphume, izithukuthuku ikhishwe, futhi nalo uyabaselwa namafutha. Miselela izingubo ezinjalo kungenziwa kusetshenziswa ezivamile ukudla ifilimu, okuyinto kudingeka uvalwe bopha imilenze.
Kuyinto engenakwenzeka ukuthola imilenze enhle ngaphandle massage ekhethekile njengoba ukususa amafutha emilenzeni kungenzeka kuphela ngokusebenzisa zonke izindlela eyinkimbinkimbi. ukwelashwa Anti-cellulite kungaba kwenziwe, kokubili e-salon kanye ekhaya. Owesifazane udinga isineke futhi amandla, ngoba iningi lolu hlobo massage kuba buhlungu kakhulu. Ekhaya, ngoba lokhu ungasebenzisa uwoyela cleaner amabhange ekhethekile. Bayoba sokudiliza fat umzimba, okubangela imilenze uzothola ukuma efiselekayo hhayi kuphela, kodwa futhi olubushelelezi eziyengayo. Nale nqubo, ungakwazi ukhohlwe "orange ikhasi" ezinqeni nemilenze.
Kukhona izindlela olukhulu ngaphezulu bashukwa yamafutha amaningi emzimbeni. Lezi zihlanganisa isigenco esiwela kwesokudla - okungukuthi liposuction. Le ndlela kuhilela uzotshala amafutha phakathi nokuhlinzwa. Sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi amaseli fat emzimbeni kungukuthi abuyiselwe. Abakwazi noma zigcwaliswe noma ukungabi nalutho. Kule futhi incike ivolumu yabo. Ukususa amaseli fat, uthi goodbye phakade nabo. Ububi eyinhloko liposuction ungabiza ke ingozi ngokuqondene ukusetshenziswa izinzwa, kanye nesidingo ahlale edla ukudla okuqinile ukuphila. Uma kungenjalo, ngeke amaseli fat egcwele, futhi uphakamise izwi kulezo zindawo lapho bafike basale khona.
Noma yimuphi yezindlela samanje kudinga isineke nokubekezela, njengoba ukususa amafutha emilenzeni - kuyinto omningi, inkokhelo okuyiwona kuyoba izincomo kanye nhla bencoma kusuka amadoda. Le nkinga kumele ziqondiswe ngokucophelela. Kulokhu, imiphumela kuzobonakala isheshe futhi uzohlala isikhathi eside. Yiba amahle, imilenze shapely ngaphansi amandla kunoma yimuphi owesifazane lyuit yena futhi silungele ukunikeza umzimba wakhe kwamaminithi ambalwa ngosuku.
Indlela engcono kakhulu ukunciphisa umzimba: ukubuyekezwa. Iyiphi indlela engcono kakhulu ukuze ngehlise umzimba?
Ukudla Ngempumelelo izinyanga 2: izinsuku cishe imenyu Izibuyekezo
Ukudla Buckwheat izinsuku ezingu-7: imenyu, imiphumela, amazwana
Bern, Switzerland - nakumasiko yaseYurophu.
Kungani iphupho champagne? incwadi mayelana champagne Dream engilazini, ibhodlela
Kuphi e laseStavropol nabangani kanye nomndeni?